Sodium Carbonate, Sodium Sulfite, Potassium Nitrate - Mit-aiv
Kpọọ Anyị: 86138 144 30017/0086 199 6195 7599
Chemicals bụ isi
Gburugburu ebe obibi ọgwụgwọ gị n'ụlọnga
Mmiri mmiri na-agba agba mmiri
Ngwaahịa chemical kwa ụbọchị
Ngwaahịa anyị na usoro mmepụta abanyela nke ọma, n'ihi na ọ bụ naanị inye gị mma kacha mma.
High-ọcha Basic flavine O, Cas: 2465-27-2 EIN ...
Magentagreencrystals Basic Green 4 / Magenta Greek ...
China emeputa Crystal violet lactone (CVL) ...
Violet 5BN Elu mma kacha mma kacha mma price ofMethyl vio ...
Ahịa ụlọ ọrụ na-ere 92-70-6 2-Hydroxy-3-naphthoi ...
Tụkwasịnụ elu àgwà dyestuff márá cas ...
High-adị ọcha 4,4′-Diaminostibene-2,2 ′ ...
Ogologo ogo 99% m-Phenylenediamine MPDA nwere ike ịbụ ...
Elu àgwà 99% N, N-Dimethyl-o-toluidine CAS N ...
N, N-Dimethylaniline maka njikọ. NWA 121-69-7 ...
J acid (2-Amino-5-naphthol-7-sulfonic Acid) ihe ...
N, N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE orylọ ọrụ CAS 99-97-8 F ...
N, N-Diethylaniline 91-66-7 ọkachamara manufac ...
Factory ọkọnọ H acid; 1-Amino-8-hydroxynaphtha ...
China emeputa Sodium nitrite nri ọkwa C ...
Tụkwasịnụ elu mma cas 7631-99-4 EINECS No: ...
Ngwaọrụ nnu sodium chloride 7647-14-5 EI ...
Sulphate CAS Mba: 7757-82-6 rụpụta EINECS N ...
Industrial nnu CAS-Mba. : 7757-82-6 sodium chlo ...
sodium nitrite nnu rụpụta Industrial Grad ...
Ọrụ sodium nitrate CAS: 7631-99-4 EINECS ...
Agba Flocculant (AB gị n'ụlọnga)
N'elu ọgwụgwọ gị n'ụlọnga Phosphating rụpụta ...
Agba agba na plasticizer High Quality w ...
Phosphate-free degreaser Eco-enyi na enyi Steel Oil ...
Agba alụlụ coagulant
Single akụrụngwa Building ụlọ acryli Waterpro ...
Water dabeere abụọ-akụrụngwa varnish abụọ componen ...
High okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ mmiri agba Waterbor ...
Polyurethane Water Agba Waterborne polyurethan ...
Epoxy mgbochi corrosion zinc-ọgaranya primer Waterborn ...
Epoxy iron ojii ojii mkpuchi Waterborne epox ...
Epoxy mgbochi-corrosion primer waterborne epoxy pr ...
High gloss ezi zuru ezu alkyd enamel Waterborn ...
Alkyd agwakọta agba Waterborne alkyd antirust ...
alkyd primer Waterborne alkyd antirust agba Hi ...
Agba alkyd tile agba Waterborne alkyd enamels ...
Alkyd itinye mkpuchi pụrụ iche agba Waterborne ngwa ngwa ...
Acryli Ji achọta Waterborne metal fi ...
Acryli Primer Water dabeere antirust agba manuf ...
Mit-ivy ụlọ ọrụ metal Advanced Acryli Latex S ...
HW-7107 na-enweghị mmiri zor-rich primer
HH-3302 epoxy anticorrosive agba agba mmiri
Mmiri dabeere multifunctional mgbochi nchara na agba
Super lekwasị Laundry omo
Advanced mba mmepụta technology na elu mma
Agba foogu coagulant
Mmiri a na-agba mmiri na-agba agba
Ndị ahịa anyị nwere ekele dị mma, ọnụahịa na nkwụsi ike anyị nwere wee nwee nnukwu ekele maka ndị ahịa anyị na Asia Pacific, North America, South America na Eastern Europe. Anyị kwenyere na anyị nwere ike ịmepụta nkwado ogologo oge na gị!
MIT-IVY Industry co., Ltd. Anyị bụ ọkachamara na mmepụta na ire nke ndị na-ahụ maka akwa dyestuff, kemịkalụ ndị bụ isi, agba ụlọ ọrụ na-agba mmiri, varnish flocculants, ma nwee osisi kemịkal atọ dị n'okpuru anyị. Anyị na-atụ anya na-ekwenyere ndị ahịa n'ụwa nile na-eke a ga-eme n'ọdịnihu mma ọnụ.
Ibu ire mbu-ire-ahia mbu ahia, a ga-enwe onye ga-ebupu ihe niile gbasara gi, echegbula onwe gi, biko kwusi ike!
Ọgọst-20-2020 N, N-Dimethyl-p-toluidine CAS: 99-97-8 ỌH NEWR.
Ọgọst-20-2020 N, N-Dimethyl-o-toluidine ohuru
Ọgọst-20-2020 N, N-Dimethylaniline
Ọgọ-10-2020 MIT-IVY ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ
Jul-17-2020 Ojiji nke Sodium sulphate
MIT-IVY ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ bụ ndị enyemaka mba ọzọ nke Xuzhou Dongqing Chemical Co., Ltd. Ngwaahịa ndị bụ isi na ahịa ụlọ anụ ụlọ nke 97%. Companylọ ọrụ ahụ dị na Xuzhou City, Jiangsu Province, bụ ụlọ ọrụ kemịkalụ ọkachamara na mmepụta na njikwa nke kemịkalụ organic, kemịkal inorganic, kemịkal dyestuff.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.ajuju